SH Yuusuf Kawnayn waxa uu la dhashay xasan al kawynayn oo ay ku abtirsadan beesha Reer aw xasan labada sheekh aabahod waxa uu aha wadaad la dhihi jiray seyed cumar oo naanestiisu aheyd al kawneyn oo ka yimid dhulka Xijaz iyo shaam ka dibne ku guursaday laba dumar somaaliya oo uu kala dhaleen xasan kawneyn iyo Yusuf kaweyn isku soo wada duub SH YUUSUF KAWNAYN Allah ha u naxriistee hindisaadisa alif wax maleh waxaa ka faaideystey dhamaan dadka ku hadla afka somaliga meel weliba oo ay joogan. Ma jiro gof ku hadla afka somaliga ee uu wax kusoo baranin hingadi uu sameeyey SH YUUSUF KAWNAYN Allah ha u naxriistee . hadii lahelo waa dhif waayo dadyowga somaliyeed ma kala laheyn degaan iyo magaalo ay kala degi jireen sababtoo ah waxey ahaayeen dad reer guraa ah hadba u guura halka ay ooga heli karaan xoolahoodi biyo iyo baad. shiikha wuxuu ku aasanyahay seylac ee ah woqoyiga somalia.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheekh_Yuusuf_Al_Kawnayn&oldid=185957"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 00:41, 6 Nofeembar 2018.